Aya ndiwo mashandiro anoita Walkie-Talkie muWatchOS 5 | Ndinobva mac
Icho chimwe chezvinhu zvikuru zvitsva zve WatchOS 5. Kunyangwe ichiita kunge diki basa, Walkie-Talkie inogona kushandiswa nguva zhinji kana vashandisi veApple Watch dzidza nezve mabhenefiti echinhu ichi.
Kunyangwe pasina hunyanzvi neiyo walkie-talkie iyo ingangoita mwana wese, iyi, kuwedzera pakukwanisa kubata chero mushandisi nebasa rinoitwa, inokutendera kuti umise iyo nekungotenderedza ruoko rwako. Izvi zvinogona kuve hukuru hukuru hweiri sevhisi. Zvino, kutaura kune mumwe munhu ari mune imwe kamuri zvichave nyore. Tichaona chimiro ichi kudonha.
Walkie-Talkie chishandiso chitsva chatichawana nyore ne yero ruvara icon. Mushure mekuimanikidza, unofanira kuwedzera shamwari yako yekutanga kuti utaure naye. Naizvozvo, ndapota tevera matanho ari pazasi:
Zvino, tsvaga iyo runyorwa rwevanofambidzana neiyo walkie-talkie sevhisi yakamisikidzwakana. Kuti uite izvi, iwe unofanirwa kuve neApple Watch (zvese asi yekutanga modhi) uye watchOS 5.
Dzvanya pamunhu iwe unoda kutaura naye.
Ipapo kadhi jena rinofanira kuoneka nezita rake.
Dhinda kuti utaure neiyi contact.
Kana wako wekubvumirana achibvumidza hurukuro, meseji inoita seinoti: Kubatana ne ...
Iye zvino hurukuro yacho inogona kuenderera zvakanaka.
Kana wako wekubata asipo, meseji inoita seinoratidza: (zita rekubata) haripo. Kana mushandisi asina izvo zvinodiwa kana asina kubatana nebasa walkie-talkie, meseji inoonekwa ichiti: kubatanidza, asi uyu meseji haushanduke.
Pane kudaro, kana iri shamwari inokukoka kuti utaure, meseji ichaonekwa ichikukoka. Mune ino kesi, isu tinogona kupa mvumo nhaurwa chaiyo, kana kumisikidza sarudzo: "Gara uchibvumira".
Kana uchinge wakabatana kazhinji, pese patinoda kutaura, isu tinofanirwa kuvhura iko kunyorera, kutsvaga wekutaurirana, tinya pairi uye batisisa kuti titaure. Madenderedzwa anoita seanoratidza kuti meseji iri kufambiswa. Iye zvino shamwari yako inofanira kuita zvakafanana kutumira mhinduro.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Aya ndiwo mashandiro anoita Walkie-Talkie muWatchOS 5
Gadzirira Mac yako kuburitswa kuri pedyo kweMacOS Mojave